मन्दिर गएकी ५० वर्षकि महिलालाई मृ’त अवस्थामा पुजारीले बोकेर घर ल्याएपछि खुल्यो पुजारीकै यस्तो रहस्य! – PathivaraOnline
Home > अपराध > मन्दिर गएकी ५० वर्षकि महिलालाई मृ’त अवस्थामा पुजारीले बोकेर घर ल्याएपछि खुल्यो पुजारीकै यस्तो रहस्य!
मन्दिर गएकी ५० वर्षकि महिलालाई मृ’त अवस्थामा पुजारीले बोकेर घर ल्याएपछि खुल्यो पुजारीकै यस्तो रहस्य!
admin January 8, 2021 January 8, 2021 अपराध, समाज	0
बीबीसी । मन्दिरमा पुजा गर्न गएकी ५० वर्षकी महिला माथि भएको घटनाले समाजलाई नै स्त’ब्ध पारेको छ । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के भने मुख्य अभियुक्त नै पुजारी देखिएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशको बदायूं जिल्लामा ५० वर्षीया एक महिला मन्दिरमा पुजा गर्न गएकी थिइन् । उनी जिवित फर्किइनन् । ति महिला माथि ज’बर’ज’स्ती समेत भएको छ । ज’ब’रज’स्ती भएको घटना लुकाउन उनको ह’ ‘त्या भएको छ ।
महिला आइतबार बेलुका पूजा गर्न जाँदा उनीमाथि यस्तो घटना भएको हो । आरोप मन्दिरका पुजारी र उनका दुई साथीमाथि लागेको छ । प्रहरीले दुई अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ जबकी मुख्य अभियुक्त मन्दिरका पुजारी अहिले पनि प्रहरीको पहुँच बाहिर छन् । यसैबीच राष्ट्रिय महिला आयोगले यो मामिलामा युपी प्रहरीसँग रिपोर्ट माग गरेको छ ।
महिलाका परिवारका अनुसार आइतबार बेलुका उनी मन्दिरमा पूजा गर्न गएकी थिइन् तर निकै बेर भएपनि घर फिर्ता भइनन् । महिलाका श्रीमानले भने, ‘राती साढे ११ बजे महात्मा (मन्दिरका पुजारी) ले ग’म्भी’र अवस्थामा महिलालाई घर लिएर आए । उनको अत्यधिक र’क्त’श्राव भइरहेको थियो । घर ल्याएपछि उनको निधन भयो । महात्मा सत्यनारायणसँग वेदराम र ड्राइभर जसपाल पनि थिए ।’
परिवारले आरोप लगाएअनुसार यसबारे प्रहरीमा रिपोर्ट गरिएको थियो तर प्रहरीले कुनै रिपोर्ट दर्ता गरेनन् । मंगलवार पोष्टमार्टम रिपोर्ट पछि उनी माथि भएको घटनाबारे रहस्य खुल्यो । त्यसपछि मात्रै प्रहरीले एफआईआर दर्ता गर्यो र बुधबार दुईजनालाई पक्राउ गर्यो । मुख्य अभियुक्त तथा मन्दिरका पुजारी सत्यनारायण अहिले पनि फ’रा’र छन् । परिवारका अनुसार सोमबार नै ऊजुरी दिइएको थियो तर एफआइआर दर्ता गरिएन । पोस्टमार्टम पछि मात्रै एफआइआर दर्ता गरियो ।
स्थानीय पत्रकार चितरंजन सिंहले मुख्य अभियुक्त मन्दिरका पुजारी सत्यनारायणले महिलाको कुवामा ख’सेर मृ’त्यु भएको बयान दिइरहे । घटनापछि मिडियासँगको कुराकानीमा पुजारीले भनेका थिए, ‘महिला कुवामा ख’सेकी थिइन् । मैले वेदराम र जसपाललाई मद्दतका लागि बोलाएँ ।
उनीहरुको मद्दतले जब उनलाई निकालेँ तब उनको मृ’त्यु भइसकेको थियो । त्यसपछि हामीले उनलाई उनको घरमा पुर्याइदियौं ।’ स्थानीय प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआञ्जुलसम्म सत्यनारायणको बयानलाई सही मानिरहेको थियो । स्थानीय मानिसका अनुसार जुन कुवामा उनी ख’सेको कुरा पुजारीले बताइरहेका थिए त्यहाँ पुग्न नै कठिन छ ।
कपाल समेत मुण्डन गरेर आमाको क्रिया गरेकि कान्छी छोरीले सबै नेपालीकाे मन जितिन्, सम्मान स्वरुप एक शेयर गर्नुहोस्